Ndeupi mutero wekunyoresa? | Ehupfumi Zvemari
Mukati memitero isina kunanga, imwe yeanonyanya kuzivikanwa ndiyo inodaidzwa kunyoreswa, pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvinokanganisa vatyairi vese munyika medu. Iyo chaiyo mubhadharo unoshandiswa kwekutanga kunyoresa kunyoresa mota, nyowani kana kushandiswa, sekureba sezvavari vakapakata injini nokuda kwekufambisa kwayo kwekushanda kwayo. Inotorwa semutero usina kunanga nekuti haina kutungamirwa zvachose vanoshandisa. Kana zvisiri izvo, kune avo vane mota yemhando idzi.
Chero zvazvingava, yawana kukosha kwakakosha mumwedzi ichangopfuura kuti hurumende iripo yakafunga kuwedzera huwandu hwayo, iyo inobhadharwa nemari yakawanda kubva gore rinouya. Mutero unongobhadhara mutero zvisina kunanga munhu ane mota, nekuti mota inonzwisiswa senge chero mota inofamba nekufambisa, chero mhando yayo uye peculiarities. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti mutero wekunyoresa hazviiti kwemakore gumi.
Chimwe chezviitiko zveiyi chaiyo yakasarudzika mutero ndeyekuti inogona kusunganidzwa kune mamwe mareti panguva chaiyo yekunyora. Semuenzaniso, mune chaiyo kesi ye VAT Naizvozvo, inowana simba rakakura rekuunganidza kupfuura mimwe mitero, kunyangwe isina kukanganisa vese vatengi, sezvo zvine musoro kufanoona. Parizvino, kuSpain kune mota dzinokwana 30.366.603 idzo 22.787.719 dzaive dzemotokari dzevapfuuri, 2.747.177 SUVs, 2.383.049 zvigadzirwa zvekushanya, 1.741.604 maveni uye mamwe ese marori emhando dzakasiyana, mabhazi nemakochi. Ivo vane hanya, mune chero mamiriro, kuripwa kweiyi isina kunangana mari.
1 Kunyoresa mutero
2 Mutero weGreen
3 Inoitiswa sei?
4 Marii yaunobhadhara muyero?
5 Zvikamu zvekusvibisa
6 Ndiani anosunungurwa pamubhadharo wako?
7 Yese mutengo wekunyorera kwako
Chimwe chezvinhu zvekutanga kuziva nezve uyu mutero usingafarirwe ndewokuti haugare wakafanana. Nekuti zvirizvo, huwandu hwemutero wekunyoresa huchaenderana nekuti mota iri nyowani here kana zvinopesana wechipiri ruoko. Zvakare zvezvimwe zvakakosha zvinhu zvakaita sehunhu hwayo uye nharaunda yakazvimiririra kwainonyoreswa. Nekuti huwandu hwayo hahuzove hwakaenzana muBasque Nyika semuBalearic Islands, kungodoma muenzaniso mumwe chete. Hazvishamise kuti mitumbi yehurumende iyi iri kuita basa iri kubva muna 2008. Nechikonzero ichi, pane misiyano yakakurisa kubva kunharaunda yakazvimiririra kuenda kune imwe uye izvo zvinogona kukutungamira kuti uende kune mumwe kunyoresa iyi sosi. Yekutakura kwakazvimirira.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti kunyoreswa kwemotokari muSpain chete inofanirwa kuitwa kamwe chete pamotokari. Kunyangwe ichigona kusiyana muridzi wayo, sezvazvinoitika mune dzakawanda zviitiko. Ichi chinhu chaunofanirwa kunge uchijekesa panguva ino kuti uwane chiyero chechokwadi chemutero uyu unoitirwa vatyairi. Nezve chikamu chemotokari yevatakuri, pane angangoita mamirioni gumi nemashanu mota dzinopfuura makore gumi, iyo inomiririra pakati pe15% ne10% yemotokari muSpain. Nepo pane zvinopesana pane mota dziri pasi pemamirioni masere dzakanyoreswa mumakore gumi apfuura.
Nekudaro, kune mumwe mutero wakabatana zvakanyanya neuyo wekunyoresa uye chinangwa chawo chikuru ndechekuchengetedza nharaunda izere. Hazvishamisi kuti imari yekunyoresa ine chinangwa chakakosha chinoenderana gadzirisa CO2 chisi mumotokari muSpain. Kusvika kune iyo iyo inobhadhara iyo ese mamodheru kana mota dzinosvibisa zvakanyanya uye idzo varidzi vadzo vasina imwe sarudzo kunze kwekubhadhara imwe mari murudzi urwu rwemutero wenyika. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye izvo zvine chekuita nekirasi yekutyaira.
Chinhu chakanangana neicho chinonzi green rate ndechekuti yapinda musimba kubvira 2008 uye inokanganisa huwandu hwakaganhurirwa hweamamodeli uye mabhureki. Mupfungwa iyi, haigone kukanganikwa chero kuti uyu mutero unofungisisa shanduko munzira yekubhadhara iyo humburumbira kugona kuburitsa magasi anosvibisa. Kuti iwe uvaone zvakanyatsojeka, ichave ine muganho wegumi nemaviri magiramu e CO120 pamakiromita. Chero zvazvingaitika, inyaya yekuranga nzira dzinosvibisa kwazvo dzekutyaira uye, pane kudaro, kuti mamodheru anonyanya kuchengetedza zvakatipoteredza ane mumwe mubairo panguva yekumisikidza mitero yavo.
Chero zvazvingaitika, zvichave zvakakodzera kuti izvi zviitwe sei mutero muSpain iyo varidzi vemota dzehunhu idzi vanofanirwa kufunga. Zvakanaka, iwe uchafanirwa kuribhadhara kamwe chete uye kwete akati wandei uye pane zvakajairika sezvinoitika nemitero yakananga. Mutero wekunyora unofanirwa kungoitwa panguva chaiyo yekunyora uye kunyoresa mota kuSpain. Naizvozvo, zvinongoitika kamwe chete uyezve haufanire kumutsidzira kubhadhara kwako.
Mune imwe tsinga, zvakakosha kwazvo kuti uzive kuti chiyero ichi zvakare chinosanganisira kutenga mota kunze kwenyika. Kana iyi iri nyaya yako, unenge usina imwe mhinduro kunze kwekunyoresa mota kuSpain, uchibhadhara mutero wekunyoresa kunze kwekunge dziri mota dzinosvibisa pasi, idzo dzisingabhadharwe. Kune rimwe divi, ichi ndicho chimwe chezvinhu zvaunofanira kufunga nezvazvo kana uchibhadhara ichi chakakosha mwero: yakaderera-inosvibisa mota. Kwete pasina, ivo vachapihwa mubairo wekubhadhara uyu mutero.
Marii yaunobhadhara muyero?
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo pamutero wekunyoresa ndizvo zvaunofanira kubhadhara kumotokari yako. Zvakanaka, mune ino pfungwa, iwe unenge uine mitsetse mina inoenderana nezvakakanganiswa uye uko kwanyanya mota dzinowanzoitika. Ruremekedzo kune zvakatipoteredza. Chimwe chinhu icho hurumende dzese dzeEuropean Union dziri kubheja pazano rakanyatso tsanangurwa kubva pamatanho aro mazhinji. Iko avo vanosvibisa isingasviki magiramu zana eEC120 pa km, vanozobvisirwa mutero wekunyoresa Kwete munyika medu chete, asi nevatinoshanda navo muEU, pasina kusarudzika.
Zvisinei, kuitira kuti uve nekujeka zvishoma panowanikwa mota yako, zvichave zvekuziva kuti ndeipi tafura inotungamirwa nhungamiro idzi. Uye ndedzipi dzatinofumura pazasi mune zvakadzama ruzivo.
0%: mota dzine chisi chakaderera pane kana chakaenzana ne120g / km ye CO2
4,75%: mota dzine emissions yakakura kupfuura 120 uye isingasvike 160 g / km ye CO2
9,75%: mota dzine chisi chakakura kupfuura kana chakaenzana ne160 uye isingasviki 200 g / km CO2
14,75%: mota dzine chisi chakakura kupfuura kana chakaenzana nemagiramu mazana maviri pakiromita ye CO200.
Nekudaro, pachigadziko chemutero chemotokari yako chiero chekururamisa chichaiswa icho chinobatanidzwa kusvika kare uyezve iyo chikamu icho chinoiswa zvinoenderana nekubuda kweichi chakazvimiririra chekufambisa. Semhedzisiro yeaya mashandiro, iwe unenge uine mari yekupedzisira yemutero wekunyoresa. Iko kwekuita kuti basa rako rive nyore, mamwe mawebhusaiti ane mapurogiramu ane simba anoita aya maverengero anogona kuve akaomarara kune vashandisi vasina ruzivo mune urwu rudzi rwekushanda.
Ndiani anosunungurwa pamubhadharo wako?
Kune rimwe divi, kune vanhu vanoverengeka vanogona kubvisa uyu mutero wekubhadhara. Semuenzaniso, vanhu vane imwe hurema hwekuremara kana vari chikamu chemhuri hombe. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti ava ndevaya vane vana kana kupfuura vana mumhuri yavo. Asi zvimwe zvikamu zvevanhu zvinogonawo kubatsirwa kubva muchiitiko ichi, senge aya akanyorwa pazasi:
Vatyairi vane mota uye vanopa kuti vakapfuura iyo zvishoma makore mana kubva kunyoresa yeimwe mota yakafanana mamiriro.
Kuti iko kuvhiya hakuitwe mukutamisa mushure memakore mana emakore zvichitevera zuva ra zuva rekunyora.
Muzviitiko zvambotaurwa, ivo vanobatsirwa vanoregererwa kubhadhara mari iyi. Semumabhizimusi akati wandei ane chekuita nekutyaira, senge tekisi, mota dzinozvityaira, kana mota dzekurenda.
Yese mutengo wekunyorera kwako
Nezve izvo izvi zvaunosungirwa nemutero zvinogona kukubhadharira, inozoverengerwa mune imwe nhanho inotangira kubva pa21% kusvika pa35%, zvinoenderana nenyaya imwe neimwe nenharaunda yakazvimiririra maunonyoresa mota. Nemaitiro akajeka anogara achisangana mumamiriro ese ezvinhu: uko iko kukwirira kwemafuta emota, inokwidza mari yekunyoresa yauchazobhadhara.
Zano rekusimudzira kuchengetedza rinoenderana nesarudzo dzeinjini dze Diesel, mahybrids uye magetsi. Iwe uchaona kuti ino sisitimu inogona kuve yakakosha kwazvo kubva kune yemutero maonero ekuona. Nemaitiro akajeka anogara achisangana mumamiriro ese ezvinhu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndeupi mutero wekunyoresa?
Mhando dzemakambani anotengesa zvinhu muSpain